Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : verseau
Lany amin' ny 28 andro ny tonom-bolana 12, araka ny isan' y tonon' andro entiny avy. Kanefa ny volana (lune) amin' ny fandehany dia maharitra 29 andro sy tapany eo ho eo hatramin' ny ahatsinanany ka hatramin' ny ahafatesany. Koa satria miakina amin' ny andro tena ahatsinanan' ny volana ny filazana ny tonon' andro dia tsy maintsy mivoaka maraina alina koa ny mpanandro rehetra rehefa mby amin' ny faha-27-n' ny volana mba hijery ny halehiben' ny volana sisa izay tazana eny amin' ny vodilanitra atsinanana. Ka raha efa kely dia kely no sisa, ka tokony ho faty ny ampitson' io, dia lazainy ho teteza-mita, na maty koa velona izany; satria afak' ampitson' io andro itazanany io dia tsinana ny volana manaraka. Raha mbola lehibebe ihany ny sisa, ka tokony tsy ho faty raha tsy afa-ampitson' izany, dia lazainy mamono tokana izany, ka tonga miampy iray ny isan' ny andro amin' io volana io. [Ravelojaona: Firaketana]